राहतको होइन, पुनर्स्थापनाको,अधिकारको कुरा गरौं। | Jukson
हावाहुरिले धेरै क्षेती गर्यो। यस प्रकोबलाई रोक्न सकिन्न, तर मानविय ढङ्गले ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पिडित जनतालाई फेरि उठेर आफ्नो जीवन धान्न योग्य बनाउनु वा उनीहरुको पुनर्स्थापना गर्नु सबैको ध्येय हुनुपर्छ। यो दाइत्व राज्यको हो किनकी राज्य जनताको हो। तेसैले राहतको होइन, पुनर्स्थापनाको अधिकारको कुरा गरौं।
१. दया र भिखको भाखामा गरिने राजनीति गर्न बन्द गरौं। फोटो खिच्न नेताले सामान बांड्ने पिडाबाट लाभ लिने राजनीति बन्द गरौं। राज्य सङ्ग क्षमता छ वा हुनु पर्छ। राज्यले केही दिन बिपतमा परेकाहरुको हेर्चाह गरि तत्काल उनिहरुको ब्यबस्थापन गर्नु पर्छ। हरेक ब्यक्तिले एक्लाएक्लै अनि नेताहरु बिस्कुट बोकेर कुदेको देख्दा लाग्छ, अहिले पनि जनता दास र नेता मालिक रहेछ्न। सबैले राज्यलाई खबरदारी गर्दै, राज्यको संयन्त्रलाई सकृय बनाउन नसक्दा जनताले झन झन पीडा भोग्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न र भोटका लोभमा मानबियताको मजाक नुउडाऔं। हरेकले सहयोग गरौं। स्वंसेवा गरौं तर आफ्नो स्वार्थकालागि होइन।
२. समस्याग्रस्त स्थानमा सरकारले इन्जिनियरहरु पठाइ तत्काल भत्केका घरहरु निर्माण गर्न थालोस । भिक्षा बांडेजस्तो पैसा बांडने होइन मानिसको उत्थानका लागि काम गरोस। स्कुलजाने बिद्यार्थीको तत्काल ब्यबस्थापन गरियोस। जसजस्ले जे दिने हो राज्यको संयन्त्रमार्फत बितरण गर्ने ब्यबस्था मिलाउं। दानी बनौ मानिसको पिडा बांड्न, सेल्फि खिच्न होइन।
३. पिडामा राजनीति गर्नु अमानबियता रोप्नु हो। हामीले अब हामीलाई बुद्धीको माध्यामबाट चलाउन सक्नु पर्छ। हामी हिजो सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्थौं। हामि समृद्ध पनि थियौं। तर आज सम्म आंउदा हामिलाई कसैले ध्वस्त बनायो। आज हामी देशका नाममा आफ्ना स्वार्थ बोकेका, बिबेकबिहिन, अराजक जत्था बनेका छौँ। रास्ट्रलाई हामिले छोडेको गाइगोठ जस्तो बनायौं। हामी हुडारंको तेस्तो बथान बनेजस्तो लाग्छ, जो सङ्गै बस्छ्न तर कतिबेला कस्ले कस्लाइ आक्रमण गर्छ थाहा नै हुँदैन।
४. हामी सबै बिभाजित छौं। तर रास्ट्रको हीतका लागि होइन आफ्नो प्रभुत्व निर्माणका लागि। नेताहरु राजनीति जान्दछ्न, तर तेहि सबैथोक हो भन्ने ठान्छन। तर राज्यका अरु थुप्रै काम हुन्छ्न जो नेताले होइन अरुले गर्नुपर्छ। हामीलाई देश चाइन्छ भने देशका नागरिक बनौं पहिला। बिपदमा परेका मानिसलाई सरकारले मानबको ब्याबाहार गरोस तेस्कालागि हामी सचेत बनौ।
५. हामी गर्दागर्दै कस्ता मानिस बनिसक्यौ? हामी आफुलाइ जे हो भन्छौ, पटक्कै त्यो होइनौं। हामी जे हौं हामी त्यो भन्नै चाहांदैनौ। हामी काम होइन हैसियतका लागि पदमा जान्छौ। हामी आफ्नो उन्नतिले खुशी होइन, अर्काको उन्नतिमा जल्छौ। हामीलाई पीडा नास होइन, पिडामा रमाउन मन लाग्छ।
दुर्दसा भोगी रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदिबहिनी अधिकारका भागी हुन दयाका होइनन। उनिहरुलाइ राज्यले फेरि खडा गर्न सक्नु पर्छ। पैसा होइन जिवनको पुनर्स्थापना हुनु पर्छ। राज्यका निकायहरु उनीहरुको अधिकार सुनिस्चित गर्न काम गरुन दया प्रदर्शन गर्न होइन।